Nkọwa ndị dị na Huawei Mate 30 Pro pụtara | Gam akporosis
Nkọwapụta isi nke Huawei Mate 30 Pro gosipụtara
Huawei ewepụtala ekwentị flagship n'oge na-adịbeghị anya P30 na P30 Pro. Iji nwee ihe ịga nke ọma na nke a, a na-atụ anya na ụlọ ọrụ China ga-ekwupụta ya Huawei Mate 30 usoro n'ọnwa Ọktọba nke afọ a.
Nwunye 30 Pro ga-abụ ekwentị kachasị ike nke ụlọ ọrụ, ebe ọ bụ na ọ ga-akwadebe chipset ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ, nke bụ nke ga-anọchi nke dị ugbu a Kirin 980 dị ka nke kachasị ike. Anyị nwere ụfọdụ data na isi nkọwa ya. Mara ha n'okpuru!
Sourceslọ ọrụ ụlọ ọrụ gosipụtara na Nwunye 30 Pro ga-akwado ya site na chipset Kirin 985 7 nm, Huawei onye na - esote ọgbọ ekwentị ekwentị ga - abịa dabere na usoro nrụpụta EVC. Iji kwado njikọta 5G, SoC ga-agụnye modem Balong 5000 5G.
El Mate 20 Pro Ọ nwere ihuenyo OLED 6.39 nke anụ ọhịa. Otú ọ dị, onye nọchiri ya nwere ike ịbịa Ibu 6,71-anụ ọhịa OLED buru ibu, nke BOE ga-enye. A na-atụ anya na ọ ga-atụgharị n'akụkụ anọ ya, mana nkọwa ya ndị ọzọ, dị ka mkpebi ihuenyo, adịbeghị. Ọ ka ga-ahụ ma ọ bụrụ na Huawei ahọrọ maka perforations na ya ma ọ bụ ihe ngosi ihuenyo ọzọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ma ọ bụ na ọ bụghị, maka ma ọ bụ 30 na Mate 30 Pro.
Mate 20 Pro na-akwado imeghe 3D ihu. Enweghị okwu ọ bụla na ma njirimara ihu ihu dị elu ga-adị na Nwunye 30 Pro. Ka ọ dịgodị, anyị na-atụ anya na ọ ga-abata na-na ihuenyo akara mkpisiaka agụ.
N'aka nke ọzọ, Nwunye 30 Pro ga-anya isi na igwefoto quad anọ, ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe a maara banyere nkọwa ya. Otú ọ dị, ihe a maara bụ na a ga-eji ihe ngosi 3D ToF (Oge nke Flight) kwadebe ya nakwa na imepụta ntọala igwefoto ga-adị ka nke Mate 20 Pro. dị na Mate 30 Pro, nke ga-agụnye ihe mmetụta igwefoto anọ na ọkụ ọkụ na etiti.
Huawei Mate 30 Pro ga-abịa na ese foto ise n'azụ, dị ka ngwa ntinye akwụkwọ si abanye
A na-ekwukwa na ekwentị nwere ike ibute batrị 4,200 mAh, nke yiri ka ọ bụ ntakịrị ihe na-akụda mmụọ, na-atụle eziokwu ahụ na ọ ga-abụ nnukwu ama. Nke a ga - ekwekọ na teknụzụ SuperCharge 55W, nke dịkwa na mpịachi ekwentị Mate X.
Na-akwụsị, Nwunye 30 Pro ga-enwekwa nkwado maka 10W na-atụgharị ụgwọ ikuku. Enweghị ozi ọ bụla na ọnụahịa nke smartphone.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nkọwapụta isi nke Huawei Mate 30 Pro gosipụtara
LG G8 ThinQ na-enweta akara igwefoto dị ala na DxOMark
A ga-ewepụta Realme X na Realme X Ntorobịa X na May 15